ငါတို့ပြစ်နှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းများ Whatafriend we have in Jesus | Calvary Burmese Church
ငါတို့ပြစ်နှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းများ Whatafriend we have in Jesus
November 17, 2010 October 2, 2013 / Peter Lwin
သီချင်းစာသား – Joseph Scriven (1819-1886)
သံစဉ် – Charles Crozat Converse
“အပေါင်းအဘော်များသောသူသည် အကျိုးနည်းရှိတတ်၏။ မိတ်ဆွေမူကား၊ ညီအစ်ကိုစွဲကပ် သည်ထက်သာ၍စွဲကပ်တတ်၏။” (သုတ္တံ ၁၈း၂၄)
တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက “ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်၏ လက်တွေ့ သီအိုလိုဂျီမှာ သူ၏ ဓမ္မသီချင်းပင်ဖြစ်သည်” ဟု လှလှပပ ရေးသားခဲ့ဘူးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချစ်သောသူတစ် ယောက် ဆုံးရှုံးရသောအခါ၌သော်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာ လိုအပ်ချက်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်အားဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှား စရာအတွေ့အကြုံတစ်စုံတစ်ရာကို ပြန်လည်သတိရသောအခါ၌၄င်း၊ ဤအရာမှန်ကြောင်း သက်သေထူနိုင်သည်။
ထိုသို့သောဓမ္မသီချင်းမှာ “ငါတို့ပြစ်နှင့် ၀မ်းနည်းခြင်းများ” စသည့်သီချင်းမျိုးဖြစ်သည်။ စာပေအရေးအသား၌ စံတင်ရလောက်သည်ဟုထင်မှတ်စရာမရှိသော်လည်း ၄င်းကို ပထမရေးသားသည့် ၁၈၅၇ မှစ၍ ရေတွက်၍မရသော ဘုရားသခင်၏ လူတို့အားစိတ် သက်သာခြင်း၊ စိတ်ကြေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်။ ဤစကားလုံးများသည် လူတို့၏ အခြေခံကျသော ၀ိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ဆီလျော်သည်ဟု ပြောင်းလဲလာသော ယုံကြည်သူများအား သွန်သင်လေ့ရှိကြောင်း သာသနာပြုဆရာများက ဆိုသည်။ စာသားနှင့် သံစဉ်တို့၏ ရိုးစင်းလွယ်ကူမှုတို့သည် ၄င်း၏နှစ်သက်စွဲလမ်းစရာကောင်းခြင်းနှင့် ခွန်အား ပင်ဖြစ်စေသည်။
Joseph Scriven သည်ကြွယ်ဝချမ်းသာသောမိဘများမှ ၁၈၁၉ ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ဒပ်ဗလင်၌ မွေးဖွါးသည်။ သူသည် ဒပ်ဗလင်၌ရှိသော တြိနီတီ ကောလိပ်ကျောင်း ထွက်ဖြစ်သည်။ အသက် (၂၅) နှစ်တွင် မိမိတိုင်းပြည်မှထွက်ကာ ကနေဒါ၌ သွားရောက်နေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ မိမိ၏မိသားစုနှင့် တိုင်းပြည်ကို ထားခဲ့ရသည့်အကြောင်း ရင်းနှစ်ခုရှိသည်။ သူ၏အသက်တာ၌ Plymouth ညီအစ်ကိုများ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သြဇာ သက်ရောက်မှုက မိသားစုနှင့် သဘောထားကွဲလွဲစေ၍တစ်ကြောင်း၊ သူနှင့်လက်ထပ်ရန်စီစဉ် ထားသည့် ဇနီးလောင်းသည် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင် ရုတ်တရက်ရေနစ်သေဆုံးသွားခြင်း ကတစ်ကြောင်း စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ Scriven သည် ခြားနားသောအသက်တာ၍ ပို၍ပို၍ အသက်ရှင်လာသည်။ တောင်ပေါ်တရားဒေသနာ ကို အရှိအတိုင်းယူသည်။ သူ၏ပိုင်ဆိုင်သောအရာများကို မရှိဆင်းရဲသားများကို အခမဲ့ပေးပြီး၊ သူဝတ်စားသည့် အ၀တ်အစားများကိုပင် ဝေမျှကာ လိုအပ်ပါက လိုအပ်သောသူများကို မစရန် တစ်ခါမျှမငြင်းပါ ဟုဆိုသည်။ Scriven ကို Ontario မြို့ရှိ Port Hope လမ်းမပေါ်၌တွေ့ပြီး ထိုလူဘယ်သူလဲ၊ သူနှင့် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ချင်တယ် ဟုမေးရာ ထိုလူကို ခင်ဗျားမရနိုင်ဘူး။ ဆင်းရဲတဲ့ မုဆိုးမတွေနဲ့ ဆေးဝါးကုသဖို့အတွက် မတတ်နိုင်တဲ့ ဖျားနာနေတဲ့လူတွေ ကိုဘဲ သူဂရုစိုက်နေတယ် ဟု ပြန်ဖြေကြပုံကို ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ထုပ်ဝေသူ အိုင်ရာစိန်ကီ က သူ၏စာအုပ်တွင် ရေးသားထားသည်။ ဤသို့ သောပုံစံကြောင့် Scriven ကို ကြည်ညိုလေးစားကြသော်လည်း သူ့ကို သိကျွမ်းသောလူများက ရူးပေါသောသူတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
“ငါတို့ပြစ်နှင့် ၀မ်းနည်းခြင်းများ” ဓမ္မတေးကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် Scriven သည်မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ သူ၏မိခင် အသည်းအသန် ဖျားနာနေသော်လည်း၊ ဒပ်ဗလင် မြို့နှင့်အလွန်ဝေးကွာလှသော နေရာ၌ နေထိုင်သောကြောင့် ဤသီချင်းစာသားများအပါအ၀င် နှစ်သိမ့်သည့်စာကဗျာ တစ်စောင်ကို ရေးသားလိုက်သည်။ နောက်ပိုင်း သူကိုယ်တိုင်ဖျားသောအခါ သူ့ထံသို့လာသော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ကုတင်အနီးရှိ စာရွက်တစ်ရွက်တွင် အောက်ပါထို စာကဗျာကို တွေ့သည်။
ငါတို့ပြစ်နှင့် ၀မ်းနည်းခြင်းများ၊ ခံရန်မိတ်ဆွေယေရှုရှိ
ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ထံတော်ချဉ်းကပ်၊ ခွင့်သည် အံ့ဘွယ်ဖြစ်ပေ၏
ငြိမ်သက်ခြင်းကို ကြိမ်ဖန်စွန့်ပစ်၊ မခံသင့်ဝန်ထမ်းခဲ့ပြီ
ကိုယ်တော်ထံတွင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်၊ မယူဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေများ ရွံရှာစွန့်ပစ်လျှင်၊ ဆုတောင်းလျက်ထံတော်ချဉ်းပါ
သူငယ်ချင်းသည် ၄င်းစာကဗျာကို စိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ပြီး ထိုစာသားများကို Scriven ရေးသားခြင်း ဟုတ်မဟုတ်မေးသည်။ Scriven က တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာဖြင့် “ဘုရားသခင်နဲ့ ကျွန်တော်လုပ်တာပါ” ဟုဖြေသည်။ ၁၈၆၉ ခုနှစ်တွင် သူ၏ကဗျာပေါင်းချုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသား ထုတ်ဝေသည်။ ၄င်းကို “Hymns and other Verses” ဟု ရိုးစင်းလှသော နာမည်ပေးထားသည်။
ရုတ်တရက် ရေနစ်ခြင်းဖြင့် Scriven ကွယ်လွန်သွားသောနောက်ပိုင်းတွင် Port Hope မြို့သူ မြို့သားများက Port Hope Peter Borough လမ်းမကြီးပေါ်၌ ကျောက်တိုင်တစ်ခုတည်ထား ကြသည်။ ၄င်းအပေါ်၌ (Whatafriend we have in Jesus) သီချင်းစာသားနှင့် အတူ အောက်ပါ စာသားကို ရေးထွင်းထားသည်။
လူအများတို့၏အကျိုးကိုလိုလားသူ၊ ဤပြောင်မြောက်လှသော တေးကဗျာကို ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် Port Hope မြို့၌ရေးစပ်သူသည် မြောက်ဖက်လေးမိုင် ရှိ ပင်ဂါလီသင်္ချိုင်းတွင် လဲလျောင်းသည်။
သံစဉ်ကိုရေးစပ်သူ Charles Crozat Converse သည် ပညာစွယ်စုံရပြီး၊ အောင်မြင်သော ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ဥပဒေလုပ်ငန်းမှ တေးဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့ ပြောင်းသည်။ Karl Reden ဟူသော ကလောင်နာမည် ဖြင့် ဘာသာရပ် အမျိုးမျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးများ၊ စာမူများကိုရေးသားသည်။ သူသည် တေးဂီတဖက်တွင် အလွန်ထူးချွန်သော ပါရမီရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတေးသီချင်း ကောင်းမြောက်များစွာကိုရေးစပ်ခဲ့သော်လည်း ဤဓမ္မသီချင်းအားဖြင့် သူ့ကိုလူသိများကာ သတိရကြသည်။
အိုင်ရာစိန်ကီ သည် ဤသီချင်းစာသားကို ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင်တွေ့သည်။ သူ၏နာမည်ကျော် ဓမ္မသီချင်းစာအုပ် “Sankey’s Gospel Hymns No. 1” ၌ နောက်ဆုံးတွင် ထည့်ထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပထမအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ဖြစ်လာမည့် နောက်ဆုံးဓမ္မသီချင်းဟုရေးသားခဲ့သည်။
1. ခရစ်ယာန်စာပေ CLC မှထုတ်ဝေသော ဓမ္မသီချင်းများ၏ရာဇ၀င်
2. Interne: http://www.porthopehistory.com/jmscriven/josephscriven.htm
← ကိုဘောမ်ယိမ်း ကိုမန်ပူတို့၏ သက်သေခံ/ချီးမွမ်းခြင်း
Calvary ကလေးငယ်များရဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း →